ညှပ်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်တပ်ဆင်မှုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ - သတင်းများ - မှတ်တိုင်
၁။ ပိုက်ညှပ်အနားကွပ်၏စံသည်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်အနားကွပ်နှင့်ကိုက်ညီရမည်။ Butterfly ဂဟေဆော်ရန်အနားကွပ်၊ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်အထူးအနားကွပ်သို့မဟုတ်အနားကွပ်ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ ပြားချပ်ချပ်ဂဟေပိုက် (လက်အမျိုးအစား) ကိုအသုံးမပြုရ။ အသုံးပြုသူသည်ပြားချပ်ချပ်ဂဟေဆော်ရန်အနားကွပ်ကိုအသုံးပြုပါကကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူရမည်။
၂။ အသုံးမပြုမီနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအခြေအနေများသည်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ ၃. အဆို့ရှင်၏အတွင်းရှိအခေါင်းပေါက်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုသန့်ရှင်းရမည်။ ဤအတောအတွင်း, ပိုက်လိုင်းအတွက်ဂဟေ slag နှင့်အခြားသန့်ဖယ်ရှားရမည်။
၅။ အဆို့ရှင်ထိုင်ခုံနှစ်ဖက်စလုံးဟာအဆို့ရှင်ရဲ့အဆုံးမျက်နှာပြင်ကနေအနားကွပ် gasket အဖြစ်ထွက်လာပြီးလိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကို install လုပ်တဲ့အခါ gasket တိုးဖို့မလိုပါဘူး။
၆။ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည် (ဒေါင်လိုက်၊ အလျားလိုက်နှင့်အတိမ်းထား) ။ Operating ယန္တရား၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အတွက် support frame ကို setting လုပ်ရန်အာရုံစိုက်ပါ။
၇။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင်နေစဉ်အတွင်း၊ butterfly အဆို့ရှင်သည်တိုက်မိခြင်းမှရှောင်ရှားရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက butterfly အဆို့ရှင်၏တံဆိပ်ခတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ လိပ်ပြာပန်းကန်သည်ခက်ခဲသောအရာဝတ္ထုများနှင့်မတိုက်ဆိုင်သင့်ပါ။ ဤကာလအတွင်းတံဆိပ်ခတ်ထားသောမျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ရန် ၄ ဒီဂရီမှ ၅ ဒီဂရီအထိဖွင့်လှစ်ရမည်။
၈။ အနားကွပ်ဂဟေဆော်ခြင်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ရာဘာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်မှုကာကွယ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အနားကွပ်ကိုထပ်မံဂဟေဆော်ရန်ခွင့်မပြုပါ။
၉။ အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ လေထုအရင်းအမြစ်များသည်ဆလင်ဒါထဲ ၀ င်ခြင်းနှင့်သာမန်အလုပ်အပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိစေရန်လေထုအရင်းအမြစ်ကိုခြောက်သွေ့အောင်သန့်ရှင်းအောင်ထားသင့်သည်။
10. Butterfly အဆို့ရှင်သည်အထူးညွှန်ကြားချက်များမပါဘဲအိမ်အတွင်း၌တပ်ဆင်နိုင်သည့်ဒေါင်လိုက်ကိုသာခွင့်ပြုထားသည်။
၁၁။ လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ပုံမှန်မဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းတွင်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေရန်နှင့်အမှားဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ တံခါးဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကိုအတင်းအကျပ်လုပ်ရန်လက်ကိုင်၏လက်မောင်းကိုခေါက်ခြင်း၊ ရိုက်ခြင်း၊ ဖမ်းခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
12. လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုသိုလှောင်သည့်အချိန်တွင်အသုံးမပြုသောအခါ၎င်းကိုခြောက်သွေ့အောင် ထား၍ လေထုထဲတွင်သိုမှီးထားခြင်းမပြုရ။ အန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများကို၎င်းပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ယိုယွင်းပျက်စီးစေသည်။